Rugby Gold Top 20-2019 Lasan’ny Cosfa ny amboara sy lelavola 4.000.000 Ar
Lasan’ny ekipan’ny Cosfa Miaramila rugby ny amboaran’ny fifaninanana Gold Top 20-2019 sy ny lelavola 4.000.000 Ariary
niaraka taminy ary voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara taona 2018/2019 ihany koa izy ireo tamin’izany. Lavony tamin’ny moka fohy 28-27 ny TFAnatihazo omaly alahady 09 febroary 2020, teo amin’ny lalao famaranana notontosaina teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka izay hipoka olona tanteraka. Amboara kelikely kokoa noho ny azon’ny Cosfa no natolotra azy ireo ary koa lelavola mitentina 2.000.000 Ar. Marihana fa ireto ekipa roa tonta ireto no hisolotena an’i Madagasikara amin’ny fifaninanana Rugby CCCOI hotontosaina manaraka. Notolorana amboara sy lelavola mitentina 750.000 Ar kosa ny mpilalao mendrika indrindra tamin’ny fifaninanana dia i Patrick avy amin’ny Tfa Anatihazo. 550.000 Ar kosa niampy amboara no natolotra an’Mika avy amin’ny Ftm Manjakaray.
Ny fileovana Uasc Cheminots sy ny Mang’Art Manjakaray no tafita hiatrika ny manasa-dalana amin’ny sokajy Federaly 2.
Voka-dalao rehetra tetsy Andohatapenaka omaly :
Ftvl Lalamaty 49 - 13 Crai Ambalavao Isotry
Ankatoky ny Famaranana sokajy Federal 2
Fbm Bemasoandro 20 - 44 Uasc Cheminot
Soe Stade 18 - 24 Mang’Art Manjakaray
Famaranana Gold Top 20 sokajy Federal 1
Tfa Anatihazo 27 - 28 Cosfa Miaramila